अपडेट : शुक्रबार, ४ कात्तिक, २०७८
आज ६२ जिल्लामा थपिए नयाँ संक्रमित
कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम अझै कम भएको छैन। आज पनि ६२ जिल्लामा नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
आज १८ सयमा संक्रमण, २९ जनाको मृत्यु
आज देशभर एक हजार ८७५ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने २९ जनाको मृत्यु भएको छ।
खोप ल्याउन नेपाल एअरलाइन्सको जहाज चीन जाँदै
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ ल्याउन नेपाल एअरलाइन्सको जहाज आज चीन जान लागेको छ।
२ हजार ९८९ संक्रमित थपिए, १ हजार ३३३ संक्रमणमुक्त बुधबार २ हजार ९८९ जना कोरोनाभाइरसका संक्रमित थपिएका छन्।
काठमाडौंसँगै ६ जिल्लामा थपिए सयभन्दा बढी संक्रमित आज काठमाडौंसहित ६ जिल्लामा एक सयभन्दा बढी कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन्।
आज २६ सय संक्रमित थपिए, १५ सय निको भए आज पनि कोरोनाभाइरसबाट निको हुनेभन्दा नयाँ थपिएका संक्रमितको संख्या धेरै रहेको छ।
काठमाडौंमा पनि बढे कोरोना संक्रमित आज काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेको छ।
आज निको हुनेभन्दा संक्रमित धेरै, २३ जनाको मृत्यु आज देशभर कोभिड-१९ बाट निको हुनेभन्दा संक्रमितको संख्या धेरै रहेको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
संक्रमण दर जोखिमकै विन्दुमा छ, बढिसक्यो भीडभाड! दैनिक थपिने कोरोना संक्रमितको संख्या तुलनात्मक घटे पनि संक्रमण दर अझै २० प्रतिशत हाराहारीमा छ। जानकारहरूले तेस्रो लहरको जोखिम औंल्याइरहँदा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सामान्य अवस्थामा जस्तै भीडभाड हुन थालेको छ।
आज परीक्षण घटाउँदा संक्रमित पनि घटे आज देशभर कोभिड-१९ को परीक्षण घटेसँगै संक्रमितको संख्या पनि घटेको छ।
‘कोभिशिल्डको दोस्रो डोज १० महीनापछि लगाउँदा पनि राम्रै नतीजा दिने’ अस्ट्राजेनेका (कोभिशिल्ड) खोपको पहिलो मात्रा लगाएको ८ देखि १२ हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउनुभन्दा ४४ देखि ४५ हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउँदा चार गुणा बढी प्रतिरोधात्मक क्षमता (एन्टिबडी) सिर्जना हुने अक्सफोर्ड खोप समूहले जनाएको छ।
अझै घटेन संक्रमणदर, १० हजार स्वाब परीक्षण गर्दा २३ सयमा कोरोना कोभिड-१९ को संक्रमणदर घट्न सकेको छैन। आज पनि दुई हजार ३२८ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ।
कुन प्रदेशमा कतिले लगाए कोभिड-१९ विरुद्धको खोप? कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पहिलो डोज देशभरका २६ लाखभन्दा बढीलाई लगाइएको छ। कोभिशिल्ड खोप अन्य प्रदेशमा वितरण गरिएको भए पनि भेरोसेलको आपूर्ति भने बागमती प्रदेश केन्द्रित भएको छ।
आज ३४ सय संक्रमित निको भए, २२ सय थपिए आज देशभर तीन हजार ४५१ कोरोनाभाइरस संक्रमित निको भएका छन् भने दुई हजार २९९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ४१९ संक्रमित
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ४१९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ।
आज २७ सय संक्रमित थपिए, चार हजार निको भए
आज देशभर दुई हजार ७६० जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने चार हजार निको भएका छन्।
लक्षण छैन भने १० दिनपछि कोरोना परीक्षण नगराउनु : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितहरूलाई लक्षण नभए दश दिनपछि परीक्षण नगराउन आग्रह गरेको छ।
३ हजार ५९७ संक्रमणमुक्त, २ हजार ८९२ संक्रमित थपिए पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ५९७ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएका छन्।
काठमाडौंसँगै पाँच जिल्लामा थपिए सयभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौंसँगै बागमती र प्रदेश १ का पाँच जिल्लामा एक सयभन्दा बढी कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन्।
आज २६ सय संक्रमित थपिए, ४३ सय निको भए आज देशभर दुई हजार ६३६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ। हिजोको तुलनामा आज संक्रमितको संख्या बढेको छ।
भारतमा चार लाखबाट ४० हजारमा झरे नयाँ संक्रमित भारतमा कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या दैनिक चार लाखबाट ४० हजारमा झरेको छ। कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर चलेको १०२ दिनपछि ४० हजारभन्दा कम संक्रमित थपिएका हुन्।
आज काठमाडौंमा पनि बढे कोरोना संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा हिजोको तुलनामा आज कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेको छ।
आज २४ सयमा संक्रमण, कोरोनाबाट ४२ जनाको मृत्यु आज देशभर दुई हजार ४४४ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने ४२ जनाको मृत्यु भएको छ।
निषेधाज्ञामा काठमाडौं उपत्यकामा के-के गर्न पाइँदैन? काठमाडौं उपत्यकामा दुई महीनाबाट लागू भइरहेको निषेधाज्ञा फेरि एक साता थपिएको छ। अबको एक सातामा भने सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन हुने भएको छ।
कोरोनाबाट पहिलोभन्दा दोस्रो लहरमा दोब्बरको मृत्यु कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ हजार नाघेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या दोब्बर रहेको छ।
तीन जिल्लामा थपिए सयभन्दा बढी संक्रमित पछिल्लो २४ घण्टामा नयाँ कोभिड-१९ संक्रमित थपिएका ५८ जिल्लामध्ये तीन जिल्लामा एक सयभन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएका छन्।
आज कोरोना संक्रमितभन्दा निको हुनेको संख्या दोब्बर आज कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या केही घटेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ।
भारतका १० राज्यमा भेटियो ‘डेल्टा प्लस’ भेरियन्ट भारतका १० राज्यमा कोरोनाभाइरसको ‘डेल्टा प्लस’ भेरियन्ट देखिएको छ। सबै उमेर समूहमा तीव्र संक्रमण हुने यो भेरियन्ट नेपालमा पनि नौ जनामा पुष्टि भएको थियो।
अझै ३१ जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित सरकारले कोभिड-१९ को दोस्रो लहर कम हुँदै गएको जनाउँदै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न थाले पनि सक्रिय संक्रमित ४५ हजारभन्दा बढी छन्। अझै ३१ जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच सयभन्दा बढी छ।